Induction Brazing Coils Fanamboaran-draharaha sy mpamatsy any Shina
Home / Induction Heating Coils / Coil Brazing fampidirana
Sokajy: Induction Heating Coils Tags: coil brazing coil, induction coil, famolavolana coil design, induction coils, induction heating coil design, indil coil mitifotra, inductor
Na inona na inona endrika, na maoderina, na fomba induction coil ilainao, afaka manampy anao izahay! Ireto misy vitsivitsy monja amin'ireo volavolan-coil an-jatony niarahanay niasa. Coil pancake, coil helical, coiler concentrator… fantsom-bozaka boribory, boribory ary mahitsizoro… Fihodinana tokana, fihodinana dimy, fihodinana roa ambin'ny folo… eo ambanin'ny ID 0.10 ka hatramin'ny ID 5 mahery… ho an'ny fanafanana anatiny na ivelany. Na inona na inona takinao, alefaso aminay ny sary sy ny antsipirihany ho an'ny teny nalaina haingana. Raha vao vaovao ianao amin'ny fanafanana fampidirana dia alefaso aminay ny faritra misy anao ho fanombanana maimaim-poana. Ny coil fampidirana fiderana nohavoakan'ny fitaovana marina izay matetika dia mibaiko ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny rafitra iray manontolo.
Namboarina avy amin'ny fantsona varahina be dia be, ny kofehy fanasitranana fanindronana dia voatariky ny fampiharana, ny fisafidianana ny fatrany, ny habetsaky ny herinaratra ary ny fotoana ny hafanana. Ny tanjon'ny coil induction dia ny hamorona lamina magnétika flux hamorona lalan-dranon-dàlana amin'izao fotoana izao ao anaty faritry ny asa mba hamaivany antsakany sy andavany ny faritra fivoriambe.
The Induction coil dia tokony hiorina tsara amin'ny fivoriambe izay ahafahana manatanteraka ny fanamainana ilaina. Ny elanelan'ny rivotra na ny fifandraisana eo anelanelan'ny asa sy ny ao anatiny dia tokony hohamaivanina noho ny antony mahomby. Ny haben'ny 0.125 inch (3.175 mm) sy ny 0.250 mm (6.350 mm) dia miavaka amin'ny fanodinana volon-koditra.
Ireo sehatra tsy voajanahary dia mety mila filalaovana fanampiny izay mitaky hery fanampiny handresena ireo fahombiazan'ny fahombiazana ireo. Ireo toe-javatra ireo dia ahitana toe-javatra izay ilaina ny familiana boribory miaraka amin'ny elanelana amin'ny rivotra midadasika na ny bobongo tsy misy manodidina.
Ny faritra mila hafanana dia mamaritra ny halavan'ny indraindray. An induction coil Izay fohy loatra dia mitaky fotoana maharitra kokoa mba hamelana ny hafanana, amin'ny fitarihana, handrakotra ny faritra. An Indonezianina fanalefahana Izany loatra no hafanana metaly mihoatra noho ny ilaina, ary noho izany dia tsy dia mahomby kokoa. Ny HLQ Induction Heating Machine Co dia manana tetikasa manokana ho an'ny indiérateur ho an'ny fanamafisana ny toerana, ary ny fiaramanidina izay mahamay ny hafanana tsy misy manodidina ny asa.
Natao tamin'ny fantsom-batana na plastika varahina be dia be ny fiasan'ny indoleo, ny fifantenana ny hafanana, ny herin'ny herinaratra ary ny hafanana. Ny tanjon'ny indraindray dia ny hamolavola lamina maodim-bozaka mba hamokarana lalan-dàlana amin'ny sehatry ny asa mba hitarafana ny hafatry ny fivoriambe ho hafahafa.
Ny coil induction dia tsy maintsy napetraka tsara amin'ny fivoriambe izay ahafahana manatanteraka ny hafanana ilaina. Ny elanelam-drivotra na ny faritra iraisana eo anelanelan'ny faritra miasa sy ny atin'ny coil dia tokony ahena kely noho ny antony mahomby. Ny elanelana endrika famolavolana mahazatra an'ny 0.125 santimetatra (3.175 mm) ka hatramin'ny 0.250 santimetatra (6.350 mm) dia mitombina amin'ny fangaro amin'ny coil helika.
Ny faritry ny hafanana dia mamaritra ny halavan'ny coil induction. Ny coil induction izay fohy loatra dia mitaky fotoana lava amin'ny famerana mba ahafahan'ny hafanana, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fampihetseham-batana, mba handrakofana ilay faritra. Ny coil induction izay be loatra dia hafanana metaly kokoa noho ny ilaina, ary noho izany dia tsy dia mahomby. HLQ induction heating Ny co dia manana endrika manokana famonoana induction ho an'ny famahana avy eo an-toerana, ary ireo vainafo izay milamina tsara tsy misy manodidina ny takelon'ny asa.
Induction Heating Fanodinana Coil sy Design fototra
kofehy fanasitranana fanindronana
Mpanafaka induction Mini